Warsaxafadeed laga soo saaray Musuq maasuqa Iyo Isdamarinta ka dhacday Doorashada Aqalka Hoose | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Warsaxafadeed laga soo saaray Musuq maasuqa Iyo Isdamarinta ka dhacday Doorashada Aqalka Hoose
Guddiga Hirgalinta Doorashooyinka dadban ee Heer Federaal iyo Guddiga Xalinta Khilaafaadka Doorashada Dadban ayaa si wadajir ah waxa ay u soo saareen War saxaafadeed ay kaga hadlayeen Musuq maasuq iyo adeegsi awoodeed oo dhacay intii ay socdeen Doorashooyinka Aqalka hoose.
Waxa ay sheegeen Guddiga in baaritaano lagu sameenayo kuraasa la tuhmayo in ay ka dhaceen Musuq maasuqa iyo adeegsiga awooda, waxa ayna sheegeen in Gudiga uu go’aan adag ka gaari doono hadii ay soo baxaan cadeymo.
Halkan ka Aqriso War Saxaafadeedka kasoo baxay labada Guddi
Waxaa labada guddi, walaac gaar ah ka muujiyaan in beelaha qaarkood aanay u hoggaansamin go’aannadii madasha hoggaanka Qaran (MHQ) ee ahayd in la hirgaliyo qoondada haweenka 30% iyado mid ka mid ah saddexdii kursiba ama kuraasta ay wadaagaan beeluhu loo asteynayo haweenka. Xeerkan waa in lagu tixgeliyaa dhammaan doorashooyinka socda. Haddii sidaas la sameyn waayo, waxaa dhalanaysa in guddiyada GFHDD iyo GXKHDD ay tallaabo ka qaadaan beelaha aan raacin nidaamka qoondada, kuwa horay u sameeyay ama kuwa sidaas samayn doona doorashooyinka soo socda.